Kedụ ka Ads.txt na Ads.cert si egbochi wayo mgbasa ozi? | Martech Zone
Kedụ ka Ads.txt na Ads.cert si egbochi wayo mgbasa ozi?
Na a $ 25 ijeri ụlọ ọrụ, $ 6 ijeri wayo abụghị negligable… ọ bụ a kpọmkwem iyi egwu na ụlọ ọrụ. Ihe ndekọ ndị ahụ sitere na nyocha nke ndị Association nke Ndị Mgbasa Ozi Mba, onye ya na ụlọ ọrụ nchekwa dijitalụ rụkọrọ ọrụ WhiteOps. Nhọrọ akpaghị aka na-eji nyiwe mmemme mgbasa ozi enyebeghị aka. Ọ bụrụ n ’ị nwere ike ịhazi mmemme algọridim, ị nwekwara ike mmemme sistemụ iji dọta mgbasa ozi.
Na-agbaziri site na ụlọ ọrụ ndị ọzọ, dị ka email, IAB Labs mepụtara nkọwapụta Ads.txt. Ads.txt nwere olile anya igbochi aghụghọ site na imepụta ndeksi nke ndị na-ere ahịa ikike na ndị nkwusa.
Gịnị bụ Ads.txt?
Ads.txt na-anọchi anya Ndị ikike Digital ere ma bụrụ usoro dị mfe, na-agbanwe agbanwe ma nwee ntụkwasị obi nke ndị mbipụta na ndị nkesa nwere ike iji kwupụta n'ihu ọha ụlọ ọrụ ha nyere ikike ire ngwa ahịa dijitalụ ha. Site na ịmepụta ndekọ ọha na eze nke ndị na-ere ahịa Digital Authorized, ads.txt ga-emepụta nghọta ka ukwuu na ngwongwo ngwongwo, ma nye ndị na-ebipụta akwụkwọ ikike ịchịkwa ngwongwo ha n'ahịa, na-eme ka o siere ndị na-eme ihe ọjọọ ike ị nweta uru site n'ire ngwaahịa adịgboroja gafee usoro okike. Dika ndi nkwusa biputara ads.txt, ndi ahia gha enwe ike ichoputa ndi edeturu ikike nke di ire maka ndi mbiputa biputara, na enye ndi ahia ohere inwe ntukwasi obi na ha na-azuta ezigbo ndi nkwusa.
Nwere ike ịhụ nke m Ugochukwu faịlụ, ebe m nwere ma LiveIntent (adresị email anyị) na Google Adsense (netwọk mgbasa ozi ngosi anyị) edepụtara.
Gịnị bụ Ads.cert?
Ads.txt bu ezigbo uzo na-enye ikike nkwụnye mgbasa ozi na saịtị gị. Agbanyeghị, ọ kwadoghị ebe mgbasa ozi si pụta. Ads.cert dị ugbu a n'okpuru mmepe iji mee nke ahụ. Dika uzo teknụzụ blockcheni si arụ ọrụ, Ads.cert ga - ahụ na ị na - enye ikike itinye ọkwa ahụ, yana inyocha Proand Side Platform (ma ọ bụ DSP).
Ads.cert, tinyere Ads.txt ga-ahụ:
Onye Mmekọ bụ ikike na-ere.
Ngwa ad bụ authentic.
Ndekọ ngwa ahịa abụwo agbanweghi.
Enwere ụfọdụ ajụjụ dị ka ma a usoro a mgbagwoju nwere ike hazie ọtụtụ arịrịọ na data na ezigbo oge dị ka mkpa. Ọ na-anọgide na-hụrụ.
Nke a bụ ihe nlere anya nke nkọwa sitere na Smart AdServer, Fralụ ọgụ wayo na ardskpụrụ: Ads.txt na Ads.cert kọwara.
Tags: nyocha nyochainye ikikead wayongwa ahiaUgbokUgochukwuIABjames onyekasmart adserver
Gbanyụọ: Ga - Blockchain ga - ewepụ anyị logins na okwuntughe?
Lumen5: Weghachi Ederede n'ime Vidio mmekọrịta gị na iji AI